सूचना तथा समाचार | अर्जुनधारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कोभिड-१९ विरुद्धको १८ वर्षदेखि माथिका सबैलाई पहिलो, दोश्रो र बुष्टर डोज खोप सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
सहकारी संस्थाहरुको आ.व. ०७७/०७८ को पेश गर्न बाँकी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने बारेको सूचना ।
वडागत धानबाली क्षतिको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा ।
Read more about वडागत धानबाली क्षतिको विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा ।
Read more about Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Internet Service
अर्जुनधारा नगरपालिका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमाको लागि रकम साझेदारी कार्यविधिको परिच्छेद ३, दफा ४ को प्रयोजनको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ०१ बाट सिफारिस भएका लाभग्राहि परिवारमुलीको नाम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।
Read more about अर्जुनधारा नगरपालिका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमाको लागि रकम साझेदारी कार्यविधिको परिच्छेद ३, दफा ४ को प्रयोजनको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. ०१ बाट सिफारिस भएका लाभग्राहि परिवारमुलीको नाम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।
अर्जुनधारा नगरपालिका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमाको लागि रकम साझेदारी कार्यविधिको परिच्छेद ३, दफा ४ को प्रयोजनको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. १० बाट सिफारिस भएका लाभग्राहि परिवारमुलीको नाम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।
Read more about अर्जुनधारा नगरपालिका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमाको लागि रकम साझेदारी कार्यविधिको परिच्छेद ३, दफा ४ को प्रयोजनको लागि अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. १० बाट सिफारिस भएका लाभग्राहि परिवारमुलीको नाम सार्वजनिक गरिएको सूचना ।
कोभिड १९ विरुद्धको (मोर्डना) खोप सञ्चालन बारे सूचना ।
Read more about कोभिड १९ विरुद्धको (मोर्डना) खोप सञ्चालन बारे सूचना ।
प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
Read more about प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
प्रस्ताव आव्हानको सूचना - कृषि विकास शाखा
Read more about प्रस्ताव आव्हानको सूचना - कृषि विकास शाखा
किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको सेवा करारमा जनशक्ति छनौटका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।
Read more about किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको सेवा करारमा जनशक्ति छनौटका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।
Read more about आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ।
प्रस्ताव स्वीकृतिको आशयको सूचना ।
Read more about प्रस्ताव स्वीकृतिको आशयको सूचना ।